May Nyane: အရင်အတိုင်း ရန်ကုန်
အိမ်ပြင် ခဏဘ၀ထဲ ပျော်ပျော်ပိုက်ပိုက် နေခဲ့။
ရိုးသားလို့ ဆင်းရဲရတာဟာ နှာခေါင်းရှုံ့စရာမဟုတ်တဲ့အပြင် ထုတ်ဖော်ချီးကျူးဖို့တောင် လိုတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း..။
"ပြည်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရတယ်"ဆိုတဲ့စကားအတွက် 'ဒီနေ့လူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်' ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ...
အများကြီး ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့.... ရယ်သွမ်းသွေးသံတွေကြားထဲက ထွက်ပြေးခဲ့ရ။ ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ အပြင်မှာမှ ပို လုံခြုံနေရတဲ့ ဘ၀တွေ...။
(၂၀၀၈ ဇွန် ၁၆)
ရန်ကုန်အကြောင်းကို ကိုယ်တွေ့လေးနဲ့ ရေးပြတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ထင်ရှားလိုက်တာ။ ဒါလေးတခုတော့ မှတ်သာသွာတယ် "ပြည်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရတယ်" ပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်တော့ လက်ခံနိုင်ပ။
ကလေး အလုပ်သမားတွေ နဲ့ မွန်းကျပ်နေတဲ့ရန်ကုန်
လမ်းပေါ်က လေလွင့် ကလေးငယ်တွေ နဲ့ ကြေကွဲနေတဲံ ရန်ကုန်
အရင်အတိုင်း ရန်ကုန် ပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ အားလုံးမျှော်လင့်နေရတာပါ ပဲ လေ
ဆရာမရေ... ငယ်ငယ်တုန်းက မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ခိုလှုံခဲ့ဘူးတဲ့ ရန်ကုန်ကို အရမ်းလွမ်းတယ်.... ဒီပို့စ်လေးဖတ်လိုက်ရတော့ ငိုချင်သွားတယ်...
Hi Teacher May Nyane,
really like almost all of your writing and happen to read some, although I wanted to read all.
And will be always following your post.
Although I agreed with you for this particular post, I still don't want to agree with this
် "ပြည်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရတယ်"
Yes, this could be true for those in your post like
1.သူတို့က ပညာရချင်တာမဟုတ်ဘဲ ဘွဲ့တခုသာ ရချင်ကြတာတဲ့။
2.စာမေးပွဲအဖြေလွှာပေါ်မှာ မေးခွန်းတွေ ချည်း ရေးကူးပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းသား
3.အောင်စာရင်းထွက်တဲ့အခါ မဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေက အောင်စာရင်းပေါ်က သူတို့နာမည် တွေကို အော်ဖတ်ပြီး ဆရာမတွေရှေ့မှာ လှောင်တောင်တောင် ရယ်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေ
Because they can afford to buy the Certificate, but (yes, I know)not the Education and Knowledge.
how about those ကလေး အလုပ်သမားတွေ နဲ့ မွန်းကျပ်နေတဲ့ရန်ကုန်
လမ်းပေါ်က လေလွင့် ကလေးငယ်တွေ, what's wrong with them??
I feel very sorry for them especially I cant afford to do anything for them.
What's wrong with our Burmese People??
What's wrong with our Parents??
I am not arguing with but just revealing my own opinions.
No offense and sorry for my poor English.
Lastly, one thing I can assure you is we wouldn't have this phrase
""ပြည်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရတယ်"
if the one who said this was born in BURMA.
The problem is not the People of Burma. But...
အဲဒီ ရန်ကုန်မှာဘဲ အမေရှိနေလို့
နလန်မထူနိုင်တဲ့ ရန်ကုန်ကို သနားမိတယ်
အပြစ်ကတော့ အားလုံးမှာရှိနေတာပဲ ..
အဲဒီသီချင်းချည်းသပ်သပ် နားထောင်တုန်းကတောင် အခုလောက် မခံစားရဘူး။ :(
ဆရာမ၊ ဒီ post ကိုဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အဖြစ်ကိုရော၊ နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ တာဝန်ကို ဘာတခုမှလောက်လောက်လားလားမလုပ်ဆောင် နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုရောကြေကြေကွဲကွဲဖြစ် မိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မတရားတာတခုခုလုပ်ရရင်ငို ချင်သလိုဖြစ်နေတတ်တာ၊ မတရားလုပ်ခံနေရတာကို မြင်နေရလျက်သားနဲ့ကိုယ်ဝင်မကူနိုင်ရင်လည်းငို ချင်သလိုဖြစ်မိတတ်တာမျိုးလောက်နဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိူယ် လူဟုတ်သေးပုံရတယ်လို့ ဇွတ်ယုံ နေရတယ်။ မြန်မာပြည်ကလူငယ်လေးတွေ “လူ၏ပုံပန်းသဏ္ဌန်”ကိုမေ့မသွားကြအောင် ဆရာမ တို့ ဒီလို postမျိုးတွေများများရေးပါဦးခင်ဗျား။
အယူဆတခု လက်ခံခြင်း မခံခြင်း မိမိရဲ့ ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ ဒါကိုအကြွင်းမဲယုံကြည်ပါတယ်။ ပြောစရာရှိတာက “ပြည်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရတယ်” ဆိုတဲ့စကားဟာ အင်မတန်တွေးစရာကောင်းတယ်။ သိပြီသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအယူအဆကို စပြောတာသူက Michiavelli (အီတလီနိုင်ငံသား , နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ပညာရှင်) ပါ (အမှတ်မမှားဘူးထင်ပါတယ်) ၊ သာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင် ပြည်သူကိုစော်ကားသလိုမျိုးထင်စရာပါ။ အမှန်တကယ်တော့ ပြည်သူရဲ့အားကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်းပါ။ အစိုးရဆိုတာပြည်သူ မရှိဘဲ ရပ်တည်လိုမရနိုင်ပါ၊ အကြောက်တရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ မကြောက်တရားဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိရဲ့ တစုံတရားအကျိုးတရားပေါ်မှာ တနည်းနည်းနဲ့တော့ သဘောတူတူ မတူတူ လက်ခံနေကြရတယ်။ ရိုးသားစွာပြောရရင် မိမိကို မိမိ ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သဘောထားများရင် အားဖြစ် လာစရာအကြောင်ရှိတယ်။
“ကလေး အလုပ်သမားတွေ နဲ့ မွန်းကျပ်နေတဲ့ရန်ကုန်
လမ်းပေါ်က လေလွင့် ကလေးငယ်တွေ,”
လိုရင်ပြောရရင် ဒီအဖြစ်တွေက လတ်ငင်းတော့ဖြေရှင်း သင့်တယ်၊ လတ်တလော အကျိုးရမယ်။ အဖြေအစစ်တော့ဟုတ်မယ်မထင်။ တကယ်တော့ဒါဟာ အကျိုးတရားတွေပါ။ မူလ အကြောင်းတရားကိုသာရှာသင့်တယ်။
အစ်မနဲ့ အတူတူ ခံစားသွားပါတယ်အစ်မ။
မိုးရေတွေထဲက ရပ်ထားတဲ့ ကားဖြူဖြူလေး၊ ရေတွေဖုံးနေတဲ့ လမ်းကျဉ်းကလေး...
.... ကျမ နှလုံးသားကို တော်တော်လေးထိခတ်သွားတယ်....
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲ လာပြောတာပါ.. မေ့တော့မလို့ ထုံးစံအတိုင်းး)
ကျွန်မကတော့ ငယ်ငယ်က သိပ်မပျော်ခဲ့ရလို့ (အခုလည်း မပျော်ပါဘူး) မွေးရပ်မြေဆိုတာကို စဉ်းစားလိုက်ရင် ကျွန်မ သူငယ်တန်းကနေ ၈ တန်းအထိ တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာသင်ကျောင်းနဲ့ ငယ်ငယ်က စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုပဲ ပိုသတိရတယ်။ ကျန်တာတွေက ငယ်ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွမ်းစရာထက် သောကရောက်စရာ ပိုများခဲ့လို့ တခါတရံ မွေးရပ်မြေဆိုတာကို မေ့ထားလိုက်ချင်တာ အမှန်ပဲ။
ဆရာမရေ... ရန်ကုန်မြို့ကြီးအကြောင်းကို ခံစားသွားပါတယ် ဒီလိုတွေ်ဖြစ်နေပေမယ့် ပုံတွေကြည့် သီချင်းနားထောင်ပြီး လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် ပြန်ချင်တုန်း......
ရန်ကုန်မြို့လေး တခုထဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာ ... တိုင်းပြည်တခုလုံး အဲ့လိုတွေ ဖြစ်နေတာပါ မရှိဆင်းရဲသားတွေ များလာတယ်၊ ဘ၀အတွက်အရှက်ကို လဲတတ်လာတယ်း(
ရန်ကုန်မှာ ကျွန်မကို မွေးခဲ့တာပါ မ…
ဒီသီချင်းနားထောင်ပြီး… ဒီပို့ စ်ဖတ်ပြီး…
ဟိုးငယ်ငယ်က ရန်ကုန်ကို ပြန်လွမ်းသွားတယ်… ပြန်တမ်းတမိတယ်…
သီချင်း နားထောင်မိတုန်းက အခုလို မခံစားမိဘူး...
ဆရာမ တွေးပြ ရေးပြလိုက်တော့မှပဲ ရင်ထဲမှာ အလွမ်းတွေရယ်၊ ဒါဏ်ရာတွေရယ် အတော်များနေပါလားလို့ ပီပီသသ သိသွားတယ်...
အခုလဲ အဲဒီသီချင်းလေး ပြန်နားထောင်နေမိတယ်...
အရင်အတိုင်းးး ရန်တွေ မကုန်သေးတဲ့ ရန်ကုန်ပါဗျာ
လမ်းတိုင်းသည် မန္တလေးမြို့သို့ ဦးတည်နေကြသည်...